Mety Hitondra Fiovana Ve Ny Fifidianana Solombavambahoaka Ao Malezia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2013 7:49 GMT
Noravàn’ i Praiministra Najib Razak ny parlemanta Malezianina tamin'ny 3 Aprily 2013 mba hanomanana ny fifidianana solombavambahoaka faha-13 ny mpikambana rehetra eo amin'ny firenena.
Tao anatin'ny bilaoginy, nanoratra mikasika ny fomba fijeriny an'i Malezia ny Praiministra, ary niresaka momba ny làlana vitan'ny governemantany. Ny Barisan Nasional, ilay fiaraha-mitantna eo amin'ny fitondràna, dia efa efa am-polo taona izao no teo amin'ny fitondràna:
Tiako ho zaraina aminareo ny fomba fijeriko mikasika an'i Malezia. Fomba fijery firenena iray feno fitokisana: ilay iray mankalaza ny mampiavaka azy amin'ny hafa, sy maka ny heriny anatin'ny fahasamihafany; ao no ahitana firoboroboan'ny toekarena mitondra fandraharahana maro mitondra vokatsoa, tolotr'asa bebe kokoa, ary fiainana tsaratsara kokoa; ao ny fanavaozana ara-politika dia mitondra fandriampahalemana sy fahafahana bebe kokoa; ary ao koa ny firaisam-pirenena dia mitondra filaminan-tsaina sy fahasambarana.
Ny lalana vitantsika hatrizay dia maneho fa isika dia governemanta iray manome ary manatanteraka ny toky nomeny. Tiako ery isika hirehareha amin'ny zava-bitantsika ary tsy hanome lanjany ireo izay mitady hanoso-potaka an'i Malezia. Mbola be ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Kanefa efa nahavita ezaka goavam-be ny firenentsika nandritry ny efa-taona lasa izay ary tokony hirehareha amin'izany isika. Andrandraintsika fa amin'ny taona 2018 isika dia ho lasa ny firenena manana ny fidiram-bola ambony indrindra – roa taona mialoha nynovinavinaina – izay zava-bita iray tena miavaka.
Io no tena fiovana marina. Fa mbola ny antsasaky ny tantara ihany no mbola voalaza amin'ny fiovan'ny firenentsika. Azontska vitaina io asa io raha toa ka matanjaka tsara ny fotoam-piasàna amin'ity fifidianana ity. Tsy mikasika ny lasa io fifidianana io fa miompana amin'ny ho avy. Momba ny firenena tiantsika hitoerana. Ny safidy eo anoloanareo dia ny fampitahana ny sarisary mikasika ny ho avintsika. Ny iray dia mahakivy sy mizarazara, ny iray hafa kosa dia mazava tsara sady mampisy fanantenana. Ny iray dia kitoatoa ary feno fampanantenana tsy misy sy tsy misy vidiny, ilay iray hafa dia tsara petraka sy voasedra tanteraka.
Sorabaventy iray momba ny fifidianana, nataon'ny antoko eo amin'ny fitondrana nandritry ny fifidianana tamin'ny taona 2008. Sary nalaina tao amin'ny takelaka Flickr an'i angshah, nampiasaina miaraka amin'ny fahazoan-dàlana
Kanefa, maro ireo Malezianina no tsy mitovy hevitra amin'izany, ary anisan'izany i Vincent Loy:
Fotoanan'ny fiovàna izao. Efa nilaza izany im-betsaka aho. Ny mpiara-mitantana ao amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia nomena 56 taona nitondrana ny firenena. Eny, tena nahatsapa fivoarana ara-toekarena marin-toerana ny firenena (saingy tsy tsara loatra nohon'ny an'ny maro hafa) kanefa niaraka tamin'ny kolikoly sy ny politika ‘maizina’ milalao ao an-damosiny miamoy ny tsy fahaiza-manaon'ny governemanta, mila ‘fitsaharana’ izany rehetra izany. Tena izao mihitsy no fotoana hanomezana vintana, farafaratsiny ny ankolafy mpanohitra ny fanjakana, hanao andrana mandritry ny dimy taona, mba hitondrana fiovàna vaovao ho an'ny firenena. Raha toa ka tsy mahavita izany ihany koa ny ankolafy mpanohitra, dia ho esorinay ihany koa izy ireo.
Somary niahiahy ihany koa anefa ilay mpiandraikitra ny fitantanam-bola Sith Lord mikasika ny fahafahan'ny Fiaraha-mientan'ny mpanohitra, Pakatan Rakyat (PR) hitazona ny fanomezan-toky nataony :
Ireto no fanontaniana ato an-tsaiko .. Afaka hitohy fiovàna miabo sy tanteraka ho an'ny firenena ve ny BN? Mety hahomby eo amin'ny fitondrana ve ny Pakatan raha homena vintana ho amin'izany? Raha akisaka daholo ireo fanomezan-toky ara-politika rehetra, ny laingalainga sy ny fitapitaka. Raha tojo olana maro, ho tafavoaka ve ny Pakatan? Efa nahita an'i BN niezaka ny ho tafavoaka isika nefa lavo izy, nefa hitantsika nanao zavatra ve ny Pakatan?
Nanolotra fomba fijery tsy mitongilana ny ” The Ramblin Trio”:
Aleo atomboka amin'i PR, ary raha mandresy izy ireo? Raha ny vinavinako dia hiaina ao anatin'ny korontana tanteraka ny firenena. Tsy fantatro hoe hatraiza, fa tsy mampisalasala ahy ny manao fanamby hoe ho tantara iraisana mahazatra any amin'ny fampalalam-baovao ny fisian'ny korontana. Izany dia satria somary sarotsarotra ihany ny hanongana ny governemanta efa nitondra vahoaka nandritry ny 50 taona… Mety hiala am-pilaminana ve izy ireo? Zavatra firifiry no nafenina sy notazomina ho tsiambaratelo ka dia mety hotsinkafonina indray. Ankoatra izay, ny governemanta mpiara-mitantana tamin'izany fotoana izany, ny PR dia tsy nanan-kery loatra ka ireo olana rehetra mbola tsy voavaha ankehitriny dia mety hampivaky ny fiaraha-mitantana. Mety hihahenjana ireo dingana arahana eo amin'ny fandraharahana satria mifotototra amin'ny fahamendrehana ny zavatra rehetra, tsara izany kanefa mino aho fa tsy ho faly amin'izany ny mpandraharaha sasany.
Toerana fandatsahana vato tamin'ny fifidianana tao Malezia tamin'ny taona 2008. Sary nalaina tao amin'ny takelaka Flickr an'i owaief89, nahazoan-dalana ny fampiasana azy
Nilaza ny fomba fijeriny mikasika io vaovao io ny olona sasany tao amin'ny Twitter ka nampiasa ny tenifototra #ge13:
@nikicheong: Mirary ireo mpirotsaka ho fidiana rehetra ho tsara vintana. Ny faniriako dia ny mba hisian'ny fifidianana malalaka sy madio, ka handresy anie ny safidin'ny vahoaka. Ento miakatra e. #GE13
@hafizhamidun: Raha izaho manokana, Pas na umno na keadilan na ankolafin-kery iza na iza ao amin'ny #GE13 , raha toa ka manao lalao madio tsy misy pentina izy ireo, dia handresy. Aoka kely aloha, loto daholo no hita na aiza na aiza!
@Al_Apun Enga anie ka hitranga izany, #ge13 ny governemanta tokony hiova. Efa ampy izay. Mandra-pihaona ry @NajibRazak sy ny tariny. #jomubah
@hannahyeoh Tao amin'ny fonja tamin'ny 3 April 2013, kely sisa i @anwaribrahim dia saiky lasa PM vaovaontsika!
Nilaza ny filohan'ny kaomisiona miandraikitra ny fifidianana ao Malezia fa tsy maintsy hatao ny 28 Mey 2013 ny fifidianana ny solombavambahoaka.
7 ora izayFilipina